Umbuzo Lufthansa Pack
unyaka 1 5 edlule #732 by bgf
Ngifake ipaki yaseLufthansa ngapha nangapha nginenkinga nge-Airbus A380.
Uma ngicindezela inkinobho ebhodini le-cockpit ngoba i-NAV, COM, i-ADF nokunye okuhleliwe akusebenzi. Lokhu kusho ukuthi angikwazi ukusetha lezi zimingcele.
Ngaphandle kwalokho le ndege inhle kakhulu futhi ngifuna ukuyisebenzisa kaningi.
Mhlawumbe othile angangisiza?
unyaka 1 5 edlule #754 by bgf
unyaka 1 5 edlule #755 by isibhakabhaka
Kuhle! Futhi mhlawumbe ungaba nesisombululo? ...
unyaka 1 5 edlule #759 by bgf
Ngipopile lokhu kuphaneli.cfg
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: isibhakabhaka
Isikhathi ukudala page: 0.619 imizuzwana